DHAGAYSO:Madaxweyne Gaas oo Garoowe kaga dhawaaqay war ay ku farxeen Shacabku – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Madaxweyne Gaas oo Garoowe kaga dhawaaqay war ay ku farxeen Shacabku
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda Punland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xubno katirsan golayaasha dowladda ayaa magaalada Garoowe kaga dhawaaqay war ay siw eyn ugu farxeen shacabka Puntland.
Darood boy says:
Garoowe farxad. Laascaano oohin iyo qabsasho. NalmeEl lagatagay dhulbahante. Oohin calmka gaas. Kucayaartay janis lumay puntland kadanbayn mayso jeegaanta. Dagaalka waa kadhacab. Gaas waa ka Shaw filming cameey kkkkkk
GAAS daacad kama ahayn dagaalku markii horeba, waana keligii saxan, GAAS IYO CALI KHALIIF GALAYR wax isma dhamaan.
Maxay shacabku ku farxeen waxba ma aydaan sheegine war dad ka beenta kadaaya times wararka aad sheegta inta badan xaqiiqada waa ay baal marsanyihiin jacayl kiina uun baad ka hadashaan waxaad moodaa qof ra’yigiis aragti dad weyne iyo in wax idiinka soo noqonayaan midna ka maydaan fekarin wararkiinu waa inay ahaada kuwo waa faqsan xeerarka anshaxa saxaafada.
waa rune beenta macaan naga daaya